Mamaklub - အပိုင်း 10
ဟုတ်ကဲ့, ဟုတ်ကဲ့! သင်ကနို့ကြော်ခဲ့မှားနေကြသည်မဟုတ်! ဤသည်အချိုပွဲစပိန်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ဒီစာရွက်ကိုမြင်လျှင်, ငါကချက်ပြုတ်ရန်သေချာစေပါရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ငါမှားမဟုတ်ခဲ့: အမြိုးသားအ
နံရံကပျကျွွောငာ 07.09.2018 အချိုပွဲ
tah-မေးစေ့ - တစ်ဆန်ကိတ်မုန့်အသားနှင့်အတူကျပ်။ အသားအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူက၏ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲရှိပါတယ်။ ငါလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ရိုးရာစာရွက်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ် -
နံရံကပျကျွွောငာ 06.09.2018 ပင်မဟင်းလျာများ
အရသာ, ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနှင့်အရသာလှပသောသုပ်! သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်ချစ်ရသူအံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ အလွန်ကြွယ်ဝသောပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်အစုံ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, အသီးအနှံ, အသားများနှင့်မှို။ ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာ
သငျသညျမိသားစုတစ်စုလုံးအစာကျွေးမယ့်အရသာနေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာချက်ပြုတ်ချင်လျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤစာရွက်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ကျနော်တို့အာလူးနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ casserole ပြင်ဆင်မည်မည်!
Black က bean ကိုဟင်းချို
သငျသညျ borscht ငြီးငွေ့တယ်ဆိုရင်, Salsola နှင့်ဟင်းချို, ထို့နောက်သင်သည်အသစ်တစ်ခုဆေးညွှန်းလိုပါတယ်။ လှပသောအရောင်ပျော့ texture နှင့်ကြွယ်ဝသောအရသာပေးသောဤအမှု၌, ကောင်းသောပဲမျိုးစုံ။ စစ်ဆေး!
နံရံကပျကျွွောငာ 06.09.2018 ပထမဦးဆုံးသင်တန်း
အသားဟင်းချိုအခြေစိုက် Pho bo
တောက်ပသောကြွယ်ဝသောလတ်ဆတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများကြီးနဲ့အတူတစ်ချိန်တည်းအလင်းဟင်းချိုမှာအလွန်ပြင်းထန်သောအရသာ။ အဆိုပါဟင်းရည်၏ပြင်ဆင်မှု, သို့သော်, တစ်ဦးအနိမ့်အပူချိန်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာချက်ပြုတ်နေသည်
ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးဟင်းချို။ ကျနော်တို့ထို့နောက်တူနာငါးနဲ့ဟင်းချိုချက်ပြုတ်သော်လည်း, သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို - ကျောင်းသားများ, အရှိဆုံးအရသာပန်းကန်သလိုပဲ။ ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို Read
10 မှစာမျက်နှာ 235«ပထမဦးစွာ«...89101112...203040...»နောက်ဆုံး»
categories အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါဗွီဒီယိုများ (45)Horoscope (2)ကနျြးမာရေး (85) ကနျြးမာရေးဆိ (21) မိခင်ကနျြးမာရေး (15)Interesnenkoe (233)အလှအပ (33) အစားအစာ (8) ဖက်ရှင် (10)မတ်ေတာသညျ (20) relationship (20)သားဖွား (54) ကိုယ်ဝန် (15) ပညာရေး (31)အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက် (3)Power က (18) မိခင်နို့တိုက်ကျွေး (2) Power ကသူနာပြုမိခင်များ (2) တစ်နှစ် (13) ထိလအားဖြင့်မွေးဖွားထံမှကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးခရီးသွား (4)ချက်ပြုတ်နည်း (1 166) ဒုတိယအဟင်းလျာများ (641) အချိုပွဲ (231) ပထမဦးစွာသင်တန်းများ (288)မိသားစုနှင့်နေအိမ် (60) လက်တွေ့အကွံဉာဏျ (Layfkahi) (37)အိပ်မက် (38)